Warbaahinta Faransiiska oo sheegtay halka uu Kylian Mbappe ka ciyaari doono fasalka soo aaddan… (Miyuu u dhaqaaqayaa Madrid?) – Gool FM
Warbaahinta Faransiiska oo sheegtay halka uu Kylian Mbappe ka ciyaari doono fasalka soo aaddan… (Miyuu u dhaqaaqayaa Madrid?)
Ahmed Nur August 3, 2021
(Paris) 03 Agoosto 2021. Mustaqbalka weeraryahanka Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappe ayaa ka mid ah cinwaannada ugu hadal heynta badan suuqa kala iibsiga xagaagan iyadoo si aad ah loola xiriirinayo inuu isaga tagayo kooxdiisa si uu ugu biiro Real Madrid oo sanadihii ugu dambeeyay lala xiriirinayay.
Balse haatan, wararka ka imaanaya dalka Faransiiska ayaa sheegaya inuu Mbappe baaqi kusii ahaanayo naadiga PSG xilli ciyaareedka soo aaddan ee 2021-22 si uu u dhammeysto qandaraaskiisa dhacaya xagaaga dambe.
Wargeyska Le Parisien ee kasoo baxa dalka France ayaa dib u gocday war ku aaddanaa in Mbappe ee sii joogi doono kooxdiisa kaasoo uu horraan daabacay 1-dii July, haatanna waxa uu wargeyska ku celiyay inuu 22-sano jirka Faransiiska ah baaqi kusii ahaanayo Parc des Princess.
Dhinaca kale, warsidaha Madrid kasoo baxa ee MARCA ayaa sheegay inay Los Blancos sugeyso inta uu xiddigan ku dhammeysanayo qandaraaskiisa si ay xagaaga dambe ula soo saxiixato isagoo bilaash ah maadaama uu xilligaas noqon doono mid xor ah.
Si kastaba ha ahaatee, Mbappe ayaa la filayaa inuu naadiga Paris kusoo laabto ciyaarta ugu horreyso ee horyaalka Faransiiska ee Ligue 1 taasoo ay la balansan tahay naadiga Troyes.
Inter Milan oo si deg deg ah kaga jawaabtay dalab ku kacayay lacag tiro badan iyo ciyaaryahan oo ay Chelsea ka gudbisay Romelu Lukaku